Ikotishi elizimele epaki - I-Airbnb
Ikotishi elizimele epaki
Dulwich Hill, New South Wales, i-Australia
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Prue, Lizzie And Cam
U-Prue, Lizzie And Cam Ungumbungazi ovelele
I-oasis enokuthula engaphakathi entshonalanga!
Woza uzohlala efulethini elinesitayela saseNew-York, eligcwele ukukhanya kwemvelo futhi lizungezwe amapaki. Yiba phakathi nebanga elilula lokuhamba lamakhefi endawo nezitolo, amabhasi nesitimela, ezikunikeza ezokuthutha eziya noma yikuphi lapho ongase udinge ukuya khona. Izilwane ezifuywayo wamukelekile!
Ikotishi lihlukene nendawo yokuhlala enkulu futhi liseduze nepaki, linesango lakho lokungena. Phansi kukhona ikhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokugezela, iwasha / isomisi, nendawo yokuhlala evulekile enombhede kasofa we-Queen omkhulu owanele izivakashi ezi-2.
Izitebhisi ezikhuphukela ekamelweni lapho kukhona umbhede we-Double, ideski elincane, indawo yokuhlala, nendawo eyanele yokugcina impahla yakho.
Kunendawo yokuhlala engaphandle ezuzayo elangeni lasekuseni nantambama, futhi iyindawo ethandekayo yokujabulela isiphuzo noma inkomishi yetiye ngenkathi ubuka impilo yenyoni.
Ingadi ivalwe ngokugcwele ukuze izivakashi ezilethe izilwane ezifuywayo.
4.98 · 98 okushiwo abanye
Le ndawo itholakala emgwaqeni onokuthula eDulwich Hill. Le ndawo izungezwe yiLaxton Reserve - ipaki elincane eliyintandokazi emindenini yasendaweni - kanye ne-Arlington Oval - inkundla yebhola lezinyawo.
Kukhona indawo yokupaka emgwaqweni yamahhala, engenathikithi.
Kukhona izinsiza eziningi ngaphakathi kwebanga lokuhamba lendawo:
• I-Sideways Deli Cafe (4 amaminithi ukuhamba)
• Izitolo zaseDulwich Hill Village (2 min ukushayela, 10 min ukuhamba)
• Isitolo esikhulu se-IGA
• I-Australia Post
• Amathilomu endawo nezindawo zokudlela
• Isiteshi Sesitimela sase-Dulwich Hill (imizuzu engu-15 uhamba ngezinyawo)
• I-Arlington Light Rail Station (uhambo lwamaminithi angu-3) *Isitimela esilula sizovalwa ukuze senze umsebenzi wokwakha kuze kube ekuqaleni kuka-2023.
Sicela uqaphele uma uhamba nezingane ezincane, ngezinye izikhathi kuba nomsindo ovela ku-Arlington Oval; Nokho, yonke imidlalo iphela ngo-9pm.
Ibungazwe ngu-Prue, Lizzie And Cam
ULizzie noCam bahlala endlini enkulu kanti uPrue uhlala eduze.
Zonke ezi-3 zitholakala kalula ngaso sonke isikhathi ukuphendula noma imiphi imibuzo noma ubunzima ongase ube nabo.
Ngiyajabula ukusebenzelana nawe, kodwa futhi ngijabulele ukukushiya uzenzela ezakho izisetshenziswa uma lokho kukufanele kangcono.
Zonke ezi-3 zitholakala kalula ngaso sonke isikhathi ukuphendula noma imiphi imibuzo noma ubunzima ongase…
UPrue, Lizzie And Cam Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-13714-2
Hlola ezinye izinketho ezise- Dulwich Hill namaphethelo